ငွေတောင်ရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 19°33′37″N 97°10′50″E﻿ / ﻿19.5602684020996°N 97.1806030273438°E﻿ / 19.5602684020996; 97.1806030273438ကိုဩဒိနိတ်: 19°33′37″N 97°10′50″E﻿ / ﻿19.5602684020996°N 97.1806030273438°E﻿ / 19.5602684020996; 97.1806030273438
ငွေတောင်ရွာ(အင်္ဂလိပ်: Ngwetaung)သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၆၈၅၀၆ ဖြစ်သည်။  ငွေတောင်ရွာသည် ဒီးမော့ဆို-လွိုင်ကော်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိပြီး ခရီးသည်များ တထောက်နားတတ်သဖြင့် စည်ကားသောရွာ ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခု၊ မေလ ၂၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၂ ရက်အကြား ငွေတောင်အခြေစိုက် ခလရ(၁၀၂) နှင့် လှုပ်ရှားစစ်ကူ ခမရ(၄၂၇) တို့က တဘက်၊ ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(ဒီးမော့ဆို) တို့က တဘက် တိုက်ပွဲများဖြစ်ရာ ရွာခံလူတို့ စစ်ရှောင်ရသည်။  ဇွန်လ လလယ်ပိုင်းတွင် အခြေအနေငြိမ်သက်စပြု၍ ရွာသားအချို့ ပြန်လာသည်တွင် အိမ်များ၊ ဆိုင်များ ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ရ၏။  ရွာရှိ အထက်တန်းကျောင်းဝင်း၌လည်း အသတ်ခံရသော ရွာမှမဟုတ်သည့် အရပ်သား ၄ လောင်းကို တွေ့သည်။ 
↑ "ဒီးမော့ဆိုတိုက်ပွဲ စစ်ဘေးရှောင် ကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံး". FRA Burmese. 2021-09-08. "... ခြောက်မိုင် ဒေါပိုးစီတဝိုက်ရယ်၊ ပြီးတော့ ငွေတောင် ဒီးမော့ဆိုနားတဝိုက်ရယ်၊ မနေ့ညကဆိုလို့ရှိရင် ငွေတောင်ဆည်မှာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့မရဲစခန်းမှာဖြစ်တော့ အဲဒီအနီးအနားက ခန့်မှန်းခြေ ရွာ ၁၀ ရွာဝန်းကျင်လောက်တော့ ရှိလိမ့်မယ်။ အခု ဒီရက်မှာဆိုရင်လည်း တခြားရွာတွေလည်း ဆက်ရှောင်နေတုန်းပဲ ..."
↑ "ဒီးမော့ဆို ငွေတောင်ကျေးရွာရှိ အိမ်နှင့်ဆိုင်ခန်းများ ဖောက်ထွင်းဖျက်ဆီးခံရ". Irrawaddy. 2021-06-15. "... တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များက ငွေတောင်ကျေးရွာတွင် တပ်စွဲခဲ့ ..."
↑ ချစ်သဲညှာ. "ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ငွေတောင်ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်း ကြိုးတုတ်ကာ မီးရှို့သတ်ခံထားရသည့် အလောင်း ၄ လောင်း ထပ်တွေ့". Civil Disobedience Movement Myanmar. 2021-06-17.
ငွေတောင်ရွာ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငွေတောင်ရွာ၊_ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်&oldid=683872" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။